Ciidamada Dowladda iyo Al Shabaab oo ku dagaalamay degmada Baardheere – SomaliaOne News Network
Oct 28, 2016 WARARKA
By Hussein Nur Degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Baardheere, Gobolka Gedo, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) – Dagaal culus ayaa xalay ka dhacay degmada Baardheere, kaasi oo dhexmaray Xoogaga Al Shabaab iyo Ciidamada Milatariga Soomaaliya ee saldhigoodu yahay degmadaasi .
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanayay Ciidamada Kenya ee ka qeybta ah howlgalka AMISOM ayaa hub kala duwan isku adeegsaday dagaalkaasi .
Warka ayaa waxa uu sheegayaa in dagaalku ka dhacay deegaanka Juungal kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay duqeymo xoogan ka geysteen tuulada Cali Xareed oo ku dhow Deegaanka Juungal.
Degaanka Juungal ayaa qiyaas ahaan 20 KM waxuu u jiraa degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Ilo wareed ayaa sheegaya in dagaalka ay ku geeriyoodeen Afar askari oo ka tirsan ciidamada Dowladda, lamana yaqaan khasaaraha nafeed ee gaaray Al Shabaab.
Al Shabaab, AMISOM, Degmada Baardheere, gobolka Gedo, Kenya, Soomaaliya tweet Loading...
Wadada Wadnaha ee Caasimadda Muqdisho oo dib loo furay kadib dayactir ballaaran oo lagu sameeyay
Read previous post:Wadada Wadnaha ee Caasimadda Muqdisho oo dib loo furay kadib dayactir ballaaran oo lagu sameeyayMuqdisho, Soomaaliya ( SOMALIAONE.NET) - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xarigga ka jaray Wadada Wadanaha...Close